ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ငြိမ်းချမ်းရေးမြတ်နိုးသူများ လိုင်ဇာသို့ ခြေလျင်ခရီး စတင်
ငြိမ်းချမ်းရေးမြတ်နိုးသူများ လိုင်ဇာသို့ ခြေလျင်ခရီး စတင်
Photos & News - DVB & The Voice Weekly
ကချင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသောတိုက်ပွဲများ ရပ်တန့်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ငြိမ်းချမ်းရေးမြတ်နိုးသူများ ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက် နံနက် ၇ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့တော်မှ ကချင်ပြည်နယ် လိုင်ဇာမြို့သို့ မိုင် ၇၀၀ ကျော် ခရီး စတင် ...။
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 5:47 PM
အကို၊ အမတွေနဲ့ ပါဝင်တဲ့သူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုယ်တွေမလုပ်နိုင်တာကို လုပ်ပေးတဲ့အတွက် အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် အားလည်းအားပေးနေပါတယ်
အရမ်းကောင်းတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေပါပဲ ဝမ်းလည်းသာ
တယ် အားလည်းတက်တယ် ဂုဏ်လည်းယူမိပါတယ်
ဘေးမသီရန်မခစေကြောင်းဆုတောင်းပါသည်။လမ်းခရီးမှာ ကျန်း မာချမ်သာကြပါစေ။
မင်းတို့သိသွားမယ်. ဥပမာ ဖါးကန့် မိုးညှင်း ကာမိုင်းဟောင်ပါး အဲ့ဒီနာမည်တွေကကချင်နာမည်လားရှမ်းနာမည်လားမေးကြည့်
စစ်တပ်ကအပစ်ရပ်ပေးထားတော့လူစုပြီးဆက်ကြေးကောက် လက်နက်ဝယ် လူသစ်အတင်းစုဆောင်းလုပ်ပြီးစစ်တပ်ကစခန်းတွေ
တာရှိလို့လဲ သူတိုတွေကရောလူတွေပဲမဟုတ်ဖူးလား ဒီလိုမျိုးကိုယ့်လူမျိုးချင်းမညီညွတ်တော့သူများနိုင်ငံကဝေဖန်တာခံရတာမင်းတို့တွေရဲ့လူမိုက်အားပေးတဲ့အပြောအဆိုအရေးအသားတွေ
ကျော်လွင်မိုး ပြောတာကို တစ်ဝက်ပဲထောက်ခံနိုင်တယ်။ စစ်သားတိုင်းလူဆိုးမဟုတ်ပါ ဆိုတာတို့တိုင်းရင်းသားတွေသိပါတယ်၊ စစ်သား နဲ့ ဗမာ နဲ့ မခွဲတတ်ဒါ တို့တိုင်းရင်းသားရဲ့အားနည်းချက်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ စစ်သားအများစုက ဗမာဖြစ်နေလို့ပါ။ ဒါကတော့ခင်ဗျားေ၇ာ တို့ရော ငြင်းလိုမရပါ။ စစ်သားက တိုင်းရင်းသားသူပုန်ကို ဖြတ်လေးဖြတ် စစ်ဆင်းရေးလုပ်လာခဲ့တုန်းက တိုင်းရင်းသား ဘားမသိ အပြစ်မဲ့ရွာသားတွေကို သတ်ဖြတ်တာတို့. သူတို့ရွာမီးရှို့ ပြစ်လိုက်တာတော့လုပ်ခဲ့တော့ ဟိုစစ်သားတွေကို ဗမာစစ်သားတွေလို့ မှတ်ကြတာပါ၊ စေတနာမွန်မြတ်တဲ့ဗမာဆရာမ၊ဆရာဝန်တွေ ကိုလည်းသူတို့မမေ့တတ်ပါဘူး၊ အခုထိ စစ်သားတွေကို ဗမာကကောင်လို့ပဲမြင်တာကို တစ်မျိုးမထင်ပါနဲ့။ အဲဒါစစ်သားက တိုင်းရင်းသားအပေါ်မှာမကောင်းတာလုပ်ခဲ့တာများလို့ ပါ။ စစ်သားကောင်းရင်. သူတို့ကို မုဒိမ်းမကျင့်ခဲ့ရင်. ရွာမီးမရှို့ ခဲ့ရင် ဗမာနာမည်ကောင်းကောင်းရခဲ့လိမ်မယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက စစ်သားတွေ မကောင်းသာလုပ်ခဲတာများလွန်းလို့ တိုင်းရင်းသားတွေကဗမာတွေကို နာကျည်းတာဖြစ်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်. ကျွန်တော်တော့ တောင်ပေါ်တိုင်းရင်းသာ အစစ်ပါ။ ကျတော့အတွေ့အကြုံပေါ်မှာအခြေံပြီးဝေမျှတာပါ။ ဗမာပြည်က ဗမာရွာတွေကို လည်း လည်ဖူးပါတယ်။ သူတို့လည်းတို့တောင်ပေါ်တိုင်းရင်းသားလို ၇ိုးသားဖြူစင်တာကို တွေ့တော့ ကျွန်တော် ဗမာမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကို ရှင်းစေခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တန်းကျတော့ဗမာလည်းတိုင်းရင်းသားပါပဲ။ စစ်သားနိုင်စားခံရခြင်းသူသူပါပဲ။ စစ်သားကောင်းရင် ဘယ်တိုင်းရင်းသားမှ သူပုန်မထပါ. စစ်သားက ပြည်သူ ကို ကာကွယ်ရမယ့်အစား ပြည်သူကို ရန်သူမှတ်နေလို့ကတော့ တို့တိုင်းပြည်ကတော့ ဘယ်တော့မှ မငြိမ်းချမ်းနိင်တော့ပါဘူး . ပြည်သူတိုင်းကဲငြိမ်းချမ်းရေးငတ်နေတယ်ဆိုတာ လူကြီမင်းတွေသိသင့်လောက်ပြီး။ ဒီလမ်းလျောက်တဲ့လူငယ်တွေက သက်သေပြလိုက်တာပါ။ သူတို့လိုလူတွေကို လေးစားပါတယ်။ လိုရာပန်းတိုင်ချောချောချွန်ချွန်. ဘေးရန်းကင်းရှင်းလိုရာပန်းတိုင်ရောက်ပါစေ။
တို့ လူမျိုးတွေ မတိုးတက်လဲ မထူးဆန်းပါ။ အတော့ကို အားယားနေကြတယ်တယ်။